Mgbe ị na-azụ ala PVC, ị ga-ahọrọ ala dị ala ma ọ bụ ala nwere ụfụfụ-News-Topflor China nwere oke
Mgbe ị na-azụ ala PVC, ị ga-ahọrọ ala dị egwu ma ọ bụ okpuru ala
Site na ngbanwe nke usoro oriri ndị mmadụ, ụlọ plastik na-aghọwanye ewu ewu na ahịa ụlọ, ọkachasị n'ebe azụmahịa. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe ọrụ, ebe azụmahịa na ngalaba ụlọ ahịa. A na-ekewa ala PVC plastics A na-eke ala ala n'ime ụfụfụ na ala dị iche iche dị iche iche. Mgbe ị na-azụ ala ụlọ PVC, olee nke ụdị foamed na ụdị okpo kachasị dị mma maka gị?
Ala ụfụfụ pụtara ịgbakwunye ụfụfụ ụfụfụ na usoro mmepụta iji mee ka oyi akwa dị ala karị, ala dị nro, nwee ume dị mma, nwere ike igwu egwu mmetụta dị mma, nwere ike ichebe nchekwa nke ndị egwuregwu, ọ dịkwa mma maka ala egwuregwu. Na, ngwa na kindergartens dịkwa nnọọ nkịtị n'oge a.
Enweghi ike isi ala, ma ihe owuwu ahụ dị oboro, ala siri ike karị, ma nwee njirimara mkpakọ siri ike. Maka ọfịs dị mfe, ọ na-adịkarị mkpa idobe oche dị iche iche, oche, na tebụl dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-eji ya Ọ bụrụ na etinye foamed plastic n'ala ruo ogologo oge, ọ dị mfe na-etolite dents na-emetụta aesthetic mmetụta. Ya mere, n'eziokwu, ebe azụmahịa dị elu dị elu na-ejikarị ụlọ azụmahịa dị obere.
Ma ala a na-agbafụfụ na ala nke ala plastik nwere ike nke aka ha. Ala fọọfụ dị nro, ọ dịkwa mfe ịhapụ ntinye mgbe etinyere ihe dị arọ na ya, mana ikike mgbake dịkwa ike; elu nke ala ahụ adịghị mfe ịhapụ mkpesa, mana arụmọrụ nkwụghachi adịghị mma, ma ọ bụrụ na enwere mkparịta ụka, ọ na-esiri ike iweghachi ọdịdị mbụ. Ya mere, mgbe anyị na-ahọrọ, anyị nwere ike ịhọrọ ala PVC kwesịrị ekwesị dịka ihe saịtị chọrọ.
Uru nke mma roba egwuregwu flooring